Uyilo lwezityalo zelanga kunye ne-AutoCAD Civil 3D-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Uyilo lwezityalo zelanga kunye ne-AutoCAD Civil 3D
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GISezintsha
Ubhengezo lwewebhu lubhengeziwe malunga nokusebenzisa i-AutoCAD Civil 3D kwizityalo zelanga. Oku kuyakuba ngulo Matshi 26, 2009 emini (12 ukuya ku-13 emva kwemini, ndiyaqikelela ixesha laseMadrid) kwaye umxholo ubandakanya:
Ukudalwa kweDigital Terrain Model (DTM).
Uhlalutyo lwe-MDT ngokusebenzisa iiprofayili zangexesha elide kunye nezingezantsi.
Inkqubo ye-MDT ukufezekisa iimeko ezifunwayo.
Ukuhamba komhlaba okuyimfuneko kunye nomphumo wokugqibela.
Ukusetyenziswa kweepodcast kusasetyenziswa ngakumbi ngenxa yenyani yokuba ngexesha lokwenyani (okanye phantse) kunokwenzeka ukubona intetho, ukubonisana kunye nezimvo ngaphandle kokushiya iofisi. Ezinye iinkampani zesoftware zitshintshele iinkomfa zonyaka kule ndlela; Ngelixa kugcinwa iindleko, zivumela abaphulaphuli abaninzi kunye nokukhululeka kwabo banomdla wokwenene kwaye abanakho ukuya kumsitho wobuso ngobuso. Nangona ukuthintelwa kokufikelela kwi-broadband yingxaki echaphazela abaphulaphuli; Nangona kunjalo kubonakala kulula ukusombulula kunokuya kumsitho wamanye amazwe.
Ngoko ukuba uthathe inxaxheba, kufuneka kuphela ukuba nenombolo yefowuni kunye nokufikelela kwi-Intanethi.
I-Microstation V8i, imfuneko